Hawlgallo ammaanka lagu sugayo oo ka socoda magaalada Garoowe, iyo laamaha amniga oo dad-siyaabo kale duwan u qab-qabtay. – Radio Daljir
Hawlgallo ammaanka lagu sugayo oo ka socoda magaalada Garoowe, iyo laamaha amniga oo dad-siyaabo kale duwan u qab-qabtay.
Agoosto 4, 2012 11:03 b 0
Garoowe, Aug, 04 – Ciidamada ammaanka ee gobolka Nugaal ayaa hawlgallo la xiriira sugida nabad-galyada ka wada magaalada garoowe ee caasimada Puntland.
Hawlgalladaan lagu sugayo ammaanka ayaa socdey maal-mihii ugu dambeeyey, iyadoo ciidamo roondo ah lagu arkayey habeenkii wadooyinka waawayn, baraha laamiga, iyo xaafadaha magaalada, kuwaasoo baaritaano ku samaynaya gaadiidka iyo dhaq-dhaqaaqa kale ee magaalada.
Taliyaha qaybta gobolka Nugaal Faarax Warsame C/raxmaan ayaa radio Daljir u sheegay inay ciidamada ammaanku gacanta ku soo dhigeen dad looga shakisanyahay inay ka dambeeyeen falal ammaanka lid ku ah oo muddooyinkii dambe ka dhacayey Garowe. Madaxa qaybta bilayska ayaa isagoo hadalkiisa sii-wata waxaa uu sheegay inay baaritaanada ka mid-tahay la dagaalanka muqaadiraadka iyo sugida ammaanka caasumada.
Faarax Warsame C/raxmaan talyaha qaybta ayaa shacabka gobolka ka codsaday inay kala shaqeeyaan ciidamada ku hawlan sugida ammaanka, waxaana uu intaasi ku daray in ay la soo xariiraan ciidanka ammaanka hadii ay arkaan khaqsiyaad ay ka shakiyaan.
Magaalada garoowe ee caasimada Puntland ayaa waxaa ay ka mid tahay meelaha ugu ammaanka badan gobollada Puntland, waxaase muddooyinkii dambe ka dhacay dilal qorshaysan iyo falal amniga lidi ku ah, kuwaasoo aan la ogayn jihada rasmiga ah ee ka dambaysa.
C/raxmaan Xuseen Xassan ‘Gaardi’
Xubnaha baarlamaanka cusub ee Somalia oo lagu dhawaaqi doono laba maalmood kadib,
Madaxda dhaqanka ee Gal-Mudug oo soo dhaweeyeen doorashadii ka dhacday Galmudug.